Inqwelo moya yokuqala yabakhweli bamanye amazwe evela eIslamabad emhlabeni kwisikhululo seenqwelomoya iKabul
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan » Inqwelo moya yokuqala yabakhweli bamanye amazwe evela eIslamabad emhlabeni kwisikhululo seenqwelomoya iKabul
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula iindaba zasePakistan • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Isithethi senqwelomoya i-Pakistan International Airlines sithe ngempela veki inqwelomoya yazimisela ukuphinda iqhubeke ngeenkonzo zorhwebo, kodwa kwakusekutsha kakhulu ukuba ithi zingahamba kanjani iinqwelomoya phakathi kwezi ngqukuva zimbini.
I-Pakistan International Airlines ibhabhela eKabul isuka e-Islamabad.
Kwakungacacanga nokuba ingaba yinqwelomoya ehleliweyo okanye inqwelo moya.
Phantse abantu abangama-70 bashiye iKabul kwikomkhulu lasePakistan kwibhodi ye-PIA.
Ukubhabha ngenqwelomoya kwi-International International Airlines ukusuka e-Islamabad kubeyindiza yabakhweli bamanye amazwe eyokufika kwisikhululo seenqwelomoya i-Kabul okoko i-Taliban yathatha i-Afghanistan.
Inqwelo moya yabakhweli ye-PIA ephethe nje abakhweli ezimbalwa iye yafika kwisikhululo seenqwelomoya iKabul namhlanje, "inabantu abali-10… mhlawumbi abasebenzi abangaphezulu kunabakhweli," ngokutsho komnye wabantu ababekhwele.
Akukacaci kwangoko ukuba ngaba Iinqwelo moya zase Pakistan Ukuhamba ngenqwelomoya kwahlelwa njengenqwelomoya okanye uhambo lwentengiso.
Isithethi se-PIA sithe ngempela veki ophetheyo wayekulungele kwaye ekulungele ukuphinda aqale ngeenkonzo zorhwebo, kodwa kwakuselekufutshane ukuba zichaze ukuba zihamba rhoqo kangakanani iinqwelo-moya phakathi kwe-Islamabad neKabul.
Isikhululo senqwelomoya saseKabul yonakaliswa kakhulu ngexesha lokufuduswa kwabantu abangaphezulu kwe-120,000 ephele kurhoxa nemikhosi yase-US ngo-Agasti 30.
Iitheminali zabakhweli, iibhlorho zomoya kunye nezixhobo zobuchwephesha zonakaliswe kakhulu kwiintsuku emva kokuba iTaliban yaqengqeleka yaya eKabul nge-15 ka-Agasti, xa amawaka abantu ahlasela isikhululo seenqwelomoya ngethemba lokubaleka esixekweni.
I-Taliban ibileqa ukwenza ukuba isikhululo seenqwelomoya sisebenze kwakhona ngoncedo lobuchwephesha oluvela eQatar, Turkey kunye nezinye izizwe.
Ukuqala kweenqwelomoya ngenqwelomoya kuya kuba luvavanyo oluphambili kwiqela labanqolobi, abathembise kaninzi ukuvumela abantu base-Afghani ukuba babe namaxwebhu afanelekileyo ukuba balishiye ilizwe ngokukhululekileyo.
I-Qatar Airways isebenze ngeenqwelomoya ezininzi ezivela eKabul kwiveki ephelileyo, zithwele abantu bamanye amazwe kunye nabase-Afghani abaphosiweyo kukufuduka.
I-Ariana Afghan Airlines iphinde yaqala ngeenkonzo zasekhaya ngoSeptemba 3.
Ijethi ye-PIA yabuya yaya e-Islamabad kungekudala emva kokufika eKabul ngoMvulo.
Bamalunga nama-70 abantu ababesebhabha baya kwikomkhulu lasePakistan, ubukhulu becala abantu baseAfghani ababezizalamane zabasebenzi abanemibutho yamazwe aphesheya, ngokutsho kwabasebenzi besikhululo seenqwelomoya.